မေစစ်ပိုင်| October 19, 2012 | Hits:3,288
ကိုနေ October 19, 2012 - 12:09 pm ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ချစားမှုကို ရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတာပါ။ မြောင်းနဲ့စပ်ဆက်နေတဲ့ဒေါင်စွန်နေရာတွေဆိုရင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး မြောင်းကိုပိတ်ပြီး ဆိုင်ခန်းတွေဖွင့်နေကြတာပါ။ အဲဒါ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာတွေ့ရပါတယ်။ မြောင်းကိုပိတ်လိုက်တော့ ရေကသွားစရာမရှိတော့ပဲ မြောင်းပိတ်ပြီး မိုးတွင်းအခါကျရင် ရေလျှံမှုဖြစ်နေပါတယ်။ ရပ်ကွက်အတွင်း အမှိုက်ကင်းစင်သန့်ရှင်းဖို့ဆိုတာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အုပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံကြေးကိုယူပြီး ဒေသအခေါ် သူတို့ရဲ့ အောက်စိုက်ဝင်ငွေကို ရှာနေကြတာပါ။ ဧည့်စရင်းသွားတိုင်ရင်လည်း အလှူငွေဆိုပြီးတောင်းပါတယ်။ အဲဒီအလှူငွေနဲ့ ရပ်ကွက်အတွက် သာရေးနာရေးကို လုပ်တာဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အခုဟာက အဲဒီအလှူငွေက သူတို့အိတ်ထဲကိုရောက်သွားတာ။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေက ဗားစကားအရ ၀ိုင်းစားလိုက်ကြတာပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ အစဉ်အလာအရ သွားစစ်ဆေးရင်လည်း လူကြီးလာတဲ့အချိန်ပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ထားမှာပါ။ ဒီအကျင့်က မြန်မာတွေမှာ အတော်စိုးပါတယ်။ ဒါတွေကို အခြေခံက အစပြုပြင်သင့်ပအါတယ်။
Reply swe htwe October 22, 2012 - 2:38 am that’sright.
Reply soesoe October 19, 2012 - 3:18 pm ပါးစပ်နဲ့ ပြောလိုက် စာနဲ့ ပြောလိုက် အလကားအရာမရောက်တာတွေ လိုက်ပြောပြီးတော့တကယ်တမ်း မတရားလုပ်လို့တိုင်ခဲ့ ရင် တိုင်တဲ့ သူသာခံစားသွားရတာ ဒုနဲ့ ဒေးပါဘဲ ယုံတဲ့လူတွေတော့စမ်းကြည့်ပေါ့ခံစားသွားရမယ်။ကြက်သရေမရှိတဲ့ ခွေးပါးစပ်နဲ့ခွေးဥပဒေ ….
Reply ပါကြီးဖိုး October 19, 2012 - 11:29 pm ရေးမြို့နယ်က ကျေးရွာအတော်များများမှာ ရွာသားများမနှစ်မြို့တဲ့ ကျေးရွားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရှိနေပါတယ်။ သိရသလောက်ကတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအကြား အပေးအယူရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ မြို့နယ်နဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ အကျင့်ပျက်မှုတွေဆိုတာကလည်း ယခင်အတိုင်းပါပဲ။ လက်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကျင့်ပျက်မှုတစ်ခုကို ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးတာကြောင့် တချို့သာမာန်လက်လုပ်လက်စားတွေ ချဲကော်မရှင်ရောင်းကြတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ချဲရောင်းနေတဲ့ ရွာသားတစ်ယောက် ရဲတွေရဲ့ အလစ်အငိုက်ဖမ်းတာ ခံလိုက်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မော်လမြိုင်ထောင်မှာ တစ်နှစ်ခွဲကျခံလိုက်ရတယ်။ ရေးကနေ မော်လမြိုင်ကိုသွားဖို့ ကားငှားခတစ်သိန်းကျော်ကို အဲဒီရွာသားက ကျခံခဲ့ရတယ်။ ရေးမှာ အမှုစစ်နေစဉ်အတွင်း တရားသူကြီးနဲ့ ရဲတွေကို ပေးလိုက်ရတာကလည်း စုစုပေါင်း ရှစ်သိန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများက ရှိစုမဲ့စုရှာကြံပြီး ပေးလိုက်ကြရတာပါ။ မော်လမြိုင်ထောင်မှာ ပေးရမှာတွေကို ထည့်မတွက်ရသေးပါဘူး။ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေပေမယ့် အောက်ခြေမှာကတော့ ပန်းပန်လျက်ပါပဲ။
Reply ဖိုးတုတ် October 20, 2012 - 11:23 am မန်းလေးမြို့က..ပန်းချီပန်းပုနှင့်ပန်တျာကျောင်းဝင်းတွင်းကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ထားပါသည်။ပြင်ပမှလုပ်ငန်းရှင်၁ဦးကဖွင့်လှစ်ထားသည်ဟုသိရပါသည်။ပန်းချီကျောင်းလား…ကော်ဖီဆိုင်လားဝေခွဲလို့မရပါ၊၊အနုပညာကျောင်းတွင်းဒီလိုကျူးကျော်တာဟာမြင်မကောင်းပါ။ကော်ဖီဆိုင်မှအလုပ်သမားများလည်းဥဒဟိုနေထိုင်သွားနေသည်ကိုတွေ့ရ။ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဟာယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့
Reply April Full October 31, 2012 - 10:06 pm သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ် ရွှေကိန္နရီအိမ်ယာ တိုက်အမှတ် ဂ ဘေးရှိမြေလွတ်အား လမ်းနယ်ကို ကျူကျော်ပြီး မဟာဓါတ်အားလိုင်းတိုင်အားရွှေ့ပြီး ဆောက်လုပ်ထားသော အိမ်တစ်လုံးရှိပါသည်။
Reply ကြီးတော် November 1, 2012 - 8:36 am “”ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်သူများ တိုင်ကြားခံရလျှင် ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်”"
Reply nay myo November 2, 2012 - 2:55 pm လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၃)ကရပ်ကွက်စာရေးကြီး(ယခင်ထွေ/အုပ်စာရေး-ငြိမ်း)နဲ့အပေါင်းအပါတွေက ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံကို အခန်းဖွဲ့ပြီး လူနေအိမ်ခန်းလိုလုပ်ငှါးစားတာ သူတို့ထွေ/အုပ်အချင်းချင်းမို့လို့ ဘာမှအရေးမယူဘူး. ပြောတော့ ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပဲ . တိုင်တော့လည်း အရေးယူတာမဟုတ်ဘူး .